Jaarroleen Raayyaa ammallee Afaanuma Oromo dubbatan, “Arsii Baalee dhufne jedhan abbaa isaanii 13 gaafadhee seenaa isaanii katabe” -
(VOA Afaan Oromoo) — Oromoon Rayyaa damee Oromoo Oromiyaa irraa fagaattee naannoo Tigraay keessa qubattu.
Akkamitti garas dhufan, yoom dhufanii fi bara hagamiin duratti achi gahaiin woma egerii wal gaafachaa wal iraa barachaa yaanu.
Jireenna Raayyaa Oromoo namuma hedduutti barreesse. Weellistuun Oromoo Saliyaa Saamii jireennaa Oromoo Raayyaa irratti fiilmii tokko qopheessuuf hujiitti jirti jedhan.
Qorattuun Jappaan Dr.Lookoo Duubaa, aadaa fi seenaa Oromoo eegii barreessuu jalqabdee ya turte.Aadaa Booranaa haga tokko barreessitee kitaaba fuula 800 caalu irratti baafte.Amma ammoo jireenna Arsii-Baalee fi Raayyaa barreessuutti jirti.
Ummatii Raayyaa Tigraay jiraata
Jarii lachuu Dr.Lookoo fi weellisuu Salihaan jaarroleen Raayyaa hardhallee afaanuma Oromoo dubbatanii gara dhufaniillee akka dansaa akka beekan qoratani argan.
“Isan eessaa dhuftani jedhee abbaa isaanii haga 12 gaafadhee walti fide. jetti Dr.Lookoon
Tana qofaa miti,“Arsii fi Raayyaan obboleeyyan. Jaarroleen baaddiyaa jiraatan Afaan Oromoo dubbatan.”
Dr.Lookoon “warra Baaleetiin Raayyaa beettuu jedhee gaafadhee jennaan “Raayyaan naannoo Ginniir, Raayituu keessatti addaan baanee jarii Tigraayitti godaanee jedhan,”jetti.
Saaliyaa Saamii( bitaa gara mirgaa lammeessoo) aadaa Raayyaa qorachuutti jirti
Saalihaa Samii Raayyaa dhaxxee fiilmi hojjachuuf hujiitti jirti jedhan. Jaarroleen Raayyaa afaan sadii: Afaan Oromoo,Afaan Amaaraa fi afaa Tigree dubbatan jetti.
Afaan hin wallaallee jettee gaafanan ammoo “ka ijoollee bade malee kenna nu jalaa hin banne ihn wallaalle jedhan jetti.”
Quftuma Oromoo Raayyaatiin Abbaayaa jedhan “Raayyaa,ijoollee Ormichaatti keessa jiraata.”
Jaarroleen Raayyaa ammoo eessaa dhuftani asi geettan jettee Salihaan gaafannaan “Awaas irraa kahee cuftuu qabatee daayinettiin dhufee asitti hore.”
Akka isaan jedhanitti“angafa tokkotti ijoollee 12 gamasii fidee asi facaase naannoon gamaa sun abbayaa jedhama haga ammaatit laftii maqaa oromoo qabdi.”
Maanguddoon Raayyaa ammallee, “hiddii keenya Ormichii eesha innii gadiiyyii (Awaashi gama)asi godaane,”jedhan.
2 thoughts on “Jaarroleen Raayyaa ammallee Afaanuma Oromo dubbatan, “Arsii Baalee dhufne jedhan abbaa isaanii 13 gaafadhee seenaa isaanii katabe””
Buqisaa Bulee says:
Gaafa tokko waaqnii jennaan; Oromoon tokkummaa isaa deffatee Oromiyaa jalatti wal ijaree biyyaa ofii bilisomsee Bulchinsa Sirna Gadaatiin buluun wanuma shakkii hin qabnedha kanaafuu Oromoon bakka jirtaan maratti harka walqabatanii wal bira dhabbachuun balloo fi rakkoo kessaatti wal iyyaafachuun malummaa amantaa oromoo ti fi dudhalee fi enyummaa isii kan dhabdee deffachuuf guyyaa dhihoo jira kana hundaa rawwaachu tokko tokkoofi tokkomuun furmaata t
Congratulations for this great job. Seennaa ilmaan Oromoo babareedwan kanna gabassu keetif galatta guddaa argadhu ! They are so wonderful in their culture, nature, beauty and solidarity. It is so that they kept their Affaan Oromoo and their culture so long, an extra ordinary endurance, despite a centaury long subjugation and cultural oppressions the Raayyaa Oromoo have faced.